EQUALIZERS HO AN'NY VKONTAKTE - VKONTAKTE - 2019
Equalizers ho an'ny VKontakte
Ny tambajotra sosialy VKontakte, araka ny fantatrao, dia manome fahafahana ny mpampiasa hihaino mozika maimaim-poana, fa amin'ny alalan'ny mpilalao baolina ambany. Noho izany antony izany, ny lohahevitra momba ny fampiasana ny antoko fahatongavana ho an'ny VC dia lasa manan-danja, izay horesahantsika ato amin'ity lahatsoratra ity.
Equalizers ho an'ny VK
Eo am-piandohana, ilaina ny manazava fa ny fomba rehetra ampiasaina amin'ny fampitoviana amin'ny vondron'ny VKontakte dia mitaky ny fametrahana rindrambaiko fanampiny. Tamin'izany fotoana izany, noho ny fiovana maro tao amin'ny fizarana "Music" Ho an'ny fampiharana VK, tsy hojerena ny fanitarana an'i Android.
Ampiasao ny fanitarana azo itokisana izay tsy mitaky fahazoan-dàlana na mamela azy hamokatra amin'ny faritra voaaro amin'ny VK.
APOKEVITRA BOOM ho an'ny Android
Fomba 1: Realtek Equalizer
Ity fomba fampiasana equalizer ity dia tsy safidy tsara indrindra, satria ny fifantenana dia alefa amin'ny feo rehetra izay asehon'ny mpamaky feo. Ankoatr'izay, ny fomba fiasa dia tsy misy afa-tsy raha toa ka mpampiasa karatra misy feo avy amin'ny orinasa Realtek ianao.
Ity boky ity dia mampiasa ny OS Windows 8.1, na izany aza, ny dikan-teny hafa dia tsy manana fahasamihafana goavana amin'ny toerana misy ny faritra voakasika.
Vakio bebe kokoa: Raiso ny solosaina ary ampidiro ny Realtek
Ampiasao ny torolalana mifanaraka amin'izany, alaina maimaim-poana ary apetraho ilay mpamily feo.
Rehefa vita ny fametrahana ary avereno indray ny rafi-piasana, midira eo amin'ny sehatry ny solosaina amin'ny alalan'ny menio "Atombohy".
Raha mampiasa ny fomba fijery ianao "Sary Masina", dia tokony ho hitanao ao amin'ny fizarana "Control Panel" teboka "Realtek HD Dispatcher".
Raha mampiasa ny fomba fijery ianao "Sokajy"ary tsindrio eo amin'ny sakana "Fitaovana sy feo".
Miania midina any amin'ny faran'ny pejy ary mifidiana sehatra iray. "Realtek HD Dispatcher".
Aorian'ny fanombohana ny Realtek HD Manager dia afaka manohy mivantana ianao amin'ny fametrahana ny feo.
Ampiasao ny tabilao ny fampiasana ny baoritra lehibe indrindra "Speakers"izay matetika no misokatra amin'ny alàlan'ny fanombohana ny mpaninjara.
Avy eo, mila mandeha any amin'ny tablette ianao "Feo mahomby" amin'ny alalan'ny menio, eo ambanin'ny fanaraha-maso fototra ny feo.
Fampiasana ilay fizarana "Any ivelan'ny" Azonao atao ny mifidy ny fomba tsara indrindra hanatsarana ny toe-javatra, izay azo alaina amin'ny alalan'ny bokotra "Reset".
In block "Equalizer" tsindrio ny bokotra "No" ary mifidiana iray amin'ireo safidy maneno sy mozika.
Afaka manararaotra ny fampiasana ny solosaina miaraka amin'ny tontonana hita maso ianao.
Lokon'ny fanamafisam-peo "Karaoke" noforonina mba hahatonga ny feon-kira mozika ambony na ambany kokoa arakaraka ny lanjany napetraka.
Raha tianao ny hampiasa ny solonao manokana, ampiasao ny bokotra "Eo amin'ny fitovàna sary".
Ampiasao ny fepetra mifanaraka amin'izany mba hametrahana ny safidinao. Afaka mampiasa ny menio preset ianao eto.
Rehefa mahatratra ny vokatra fanalahidy tianao ianao dia tsindrio "Save".
Ao anatin'ilay dingan'ny fametrahana ireo mari-pamantarana dia tsy manadino mihaino mozika, satria ny paikady dia ampiharina tsy misy famonjena.
Ao amin'ny fikandrana izay miseho, ao amin'ny andalana ambany, midira ny anaran'ilay toerana, izay ampidirina any amin'ny lisitra ankapobeny misy ny solosaina, ary tsindrio "OK".
Raha efa namorona fiovaovana hafa ianao, dia azonao atao ny misolo azy ireo amin'ny fisafidianana ny lisitry ny lisitra sy ny fampiasana ny bokotra "OK".
Azonao atao ny manala ny fampiasana feo amin'ny fotoana rehetra amin'ny alalan'ny bokotra "Reset".
Raha nanao ny zava-drehetra marina ianao, ny feo ao amin'ny tambajotra sosialy VKontakte dia heno tsara araka izay ilainao azy.
Fomba 2: VK Blue Expansion
Ny fametrahana VK Blue dia natao hanitatra ny fahaiza-manaon'ny tranokala VK mikasika ny fizotran'ny fihainoana horonam-peo ao amin'ny tranonkala Google Chrome. Ankoatra izany, mampiasa ny VK Blue ianao, amin'ny maha-mpampiasa anao, dia mahazo fihenam-bava miavaka izay mifanaraka amin'ny dikan-drakitra ofisialin'ny tranonkala ary tsy miteraka olana amin'ny Internet.
Mandehana any amin'ny fivarotana Chrome ao amin'ny aterineto
Sokafy ny pejin-tranonkalan'ny Chrome amin'ny aterineto, mampiasa ny rohy mety.
Mampiasa ny karoka fikarohana "Fikarohana entana" find the application "VK Blue".
Mba hampisehoana ny isa maromaro fanampiny fanampiny dia jereo ny boaty. "Fanitarana".
Eo ankavanan'ny pejy, jereo ny fanampiana ilaina ary tsindrio ny bokotra. "Install".
Ilaina ny manamarina ny fanitarana ny fampidirana amin'ny alàlan'ny varavarankelin'ny rafitra pop-up.
Rehefa vita ny fametrahana, dia haverina haingana amin'ny pejy ianao amin'ny alàlan'ny horonan-tsarinao ao amin'ny tranokalan'ny VKontakte.
Raha tsy nisy ny fanovana natao, dia mandehana any amin'ny tranokala VK ary sokafy ny fizarana eo ambanin'ny sakafo maina "Music".
Ny hetsika hafa rehetra dia mifandraika mivantana amin'ny fanitarana.
Araka ny hitanao, aorian'ny fametrahana ny add-on, dia ampitomboina amin'ny sakana ny interface interface "VK Blue".
Ampiasao ny lahatsary tianao indrindra amin'ny lalao playlist raha te hampiasa ilay equalizer.
Jereo koa: Ahoana ny fihainoana ny mozika VC
Ankehitriny, ny faritra ambonin'ilay mpilalao dia ho lasa singa fototra amin'ny mpilalao.
Raha tsy tianao ny manitsy ny sombin-tsokosoko, arakaraka ny karazana mozika nilalao, dia tsindrio ny boaty manaraka "Eritrereto mialoha".
Ao amin'ny faritra havia eo amin'ny faritra VK Blue, dia atolotra miaraka amin'ny menio misy presets azo atao ianao.
Eo am-pelatanana dia misy ny fahafahana hampiasa feo mahomby amin'ny alalan'ny sakafo "Effects"Na izany aza dia natao ho an'ireo mpampiasa azy ny PRO status.
Azonao atao ny mamela ny fomba PRO maimaim-poana maimaim-poana amin'ny alàlan'ny famoahana amin'ny rindrina fampidinana manokana avy amin'ny fokonolona ofisialy.
Ao amin'ny faritra havanan'ny faritry ny fanitarana dia misy sakafo informatika sy karazana fanohanana samihafa.
Mariho fa ity fanitarana ity dia manana fahaizana miavaka haka an-tsarimihetsika feo.
Jereo koa: Ahoana ny fandefasana mozika VK
Azonao atao ny mametraka ny fanalahidinao amin'ny sombin-damba amin'ny alàlan'ny endritsoratra lehibe amin'ny fanitarana.
Mba hamonjena ireo fanovana, ampiasao ny bokotra "Save".
Ao amin'ny fikandran'ny configurable manokana, fenoy ny saha araka ny tokony ho izy amin'ny fidirana amin'ny anarana sy ny marika eo amin'ny famoronana ianao.
Aorian'ny fanitsiana ireo mari-pamantarana napetraka, dia heno tsara araka izay ilainao ny mozikao.
Satria efa niova be ny politikan'ny tranonkala tambajotra VKontakte, vao haingana, izay tena marina tokoa ny fidirana amin'ny fampiratiana ny API, ireo fomba ireo no safidy tokana. Ankoatr'izay, ny fomba faharoa dia tsy hitsahatra koa.
Jereo koa: 5 fampitomboana malaza ho an'ny Opera
Na dia eo aza izany, maro ireo mpandrindra fampitomboana izay manampy ny VK mizak'elatra no mamolavola am-pahavitrihana ny fanampiana fanampiny. Vokatr'izany, amin'ny ho avy, dia mety hipoitra ny fomba vaovao ahafahana mibaribary.